Halkapınarစက်လုပ်သမားအဆုံး၏သားကောင်များ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirHalkapınarစက်လုပ်သမားအဆုံး၏သားကောင်များ
07 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, စက်ခေါင်း, တူရကီ 0
ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ၏စက်လုပ်သမားကို ပို. အရေးကြီးသောမကျေနပ်မှုသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဖြေရှင်းခဲ့သည်။
Izmir Halkapınar (Halkapınarဂိုဒေါင် - Balikesir, အစ္စတန်ဘူလ်, Denizli) အတွက်လူသိများသည်နှင့်အမျှရထားနှင့်စက်ခေါင်းထောက်ပံ့ကြောင့် ingress နှင့် Egress ၏ရှည်လျားသောထားရန်အသွားအလာနှင့်အချိန်ပြင်းထန်မှု, ဂိုဒေါင်ထဲမှာရထားအရေအတွက်ကိုရတဲ့၏အခက်အခဲများကြုံနေရခဲ့သည်။ ဤလှံတံရှားပါးမှုကြောင့်လည်းစက်လုပ်သမား 5545 မော်ဒယ်များဖြစ်ကြရထားလှုပ်ရှားမှုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုနေထိုင်ခဲ့လို့မရပါဘူး။
သမဂ္ဂများ, အက်စ်အေပို့ဆောင်ရေး TCDD ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်မှ General Manager, ခရီးသည်တင်ကားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်;
ဂိုဒေါင် entry ကိုများနှင့်ဟောင်းဂိုဒေါင်အပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးမျဉ်းကြောင်းမှရထားအစုံနှင့်စက်ခေါင်းထွက်ခွာထံမှHalkapınar; အရာကခေတ်သစ် ORR ၏အချုပ်အခြာဒီဇင်ဘာလ 8 2019 အတွက်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းများအတွက်လိုအပ်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအလုပ်၏ Institution များအားဖြင့်ပြီးစီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုအရာရှိများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ရှည်လျားသောစက်လုပ်သမား၏အရေးပါသောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသားကောင်ခဲ့, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen သည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Uludağdaကြွက်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံး 17 / 12 / 2010 Uludag, ပြည်သူ့အလုပ်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေချနေဖြင့်ပြင်ဆင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် Uludag အတွက်ဟိုတယ်မေလတိုင်အောင်ပေးထားပါလိမ့်မည် Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahabettin Harput Harput "အတည်ပြုကြောင်းညွှန်ပြ။ Uludag အထူးဥပဒပြင်ဆင်နေသည်။ Uludag ပရမ်းပတာနဲ့အများကြီးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအတွက်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahabettin Harput, ပြည်သူ့အလုပ်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေချနေဖြင့်ပြင်ဆင်စီမံကိန်းကို Uludag အတည်ပြုခဲ့ကပြောသည်။ မေလ 2011 ၏အဆုံးကတည်းက Uludag အခွင့်အာဏာအတွက်အသစ်သောအသက်တာကိုယခုတဖြည်းဖြည်းကိုပြင်ဆင်အစီအစဉ် Harput "ဟုအဆိုပါစည်ပင်သာယာမှပေးထားခဲ့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီဦးတည်ချက်အတွက်လက်ရှိသဘောတူ။ အပြီးသတ်တဲ့အခါမှာ Uludag အများအပြားဒုက္ခနှင့်ဆက်စပ်ဥပဒေအစီအစဉ်များကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ...
Sarıgöldကျောင်းလမ်းအဆုံးဆငျးရဲဒုက်ခ 07 / 01 / 2015 အဆုံးဆငျးရဲဒုက်ခSarıgöldကျောင်းလမ်းမကြီး: Sarigol မြို့နယ် Manisa, ကျောင်းမှ 530-ခြေလျင်လမ်းမိုးရာသီရာသီဥတုကြောင့်ရွှံ့၏အတန်းရွက်ပေါက်အတူတူပင်အဆောက်အဦ Sarigol မင်္ဂလာ Erturk Anatolian High School တွင်၌၎င်း, Sarıgöl Anatolian High School တွင်အတွက်လေ့လာနေစုစုပေါင်း 500 ကျောင်းသားများ, အခက်အခဲရှိသည်။ လမ်းစေရန်ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများအရေးယူစေရန်ပင်ပြင်ဆင်ထားဝန်ဆောင်မှု tools များအတွက် AK ပါတီ Manisa လက်ထောက် Muzaffer နိုင်ငံသားရိုက်ထည့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်, အဝေးပြေး xnumx'nc ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်စီမံကိန်းများ၏ validation ကိုမြူနီစီပယ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအဘို့ပြင်ဆင်ကြေညာခဲ့သည်။ မြေငလျင်-ခံနိုင်ရည်အဆောက်အဦး '' ယိုယွင်း '' အစီရင်ခံစာပေးထားခဲ့သည်ရှိမရှိ၏ပြဌာန်းခွင့်အပေါ်Sarıgöl Anatolian High School တွင်မယ့်နှစ်ထပ်,2စာသင်ခန်း။ 15-2014 ...
Bursa လေ့လာရေးခရီးပြီးဆုံးအတွက် 48 နှစ်ပတ်လည်ကေဘယ်လ်ကား 23 / 10 / 2012 BURSA နိုဝင်ဘာလ 48 အတွက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင့် Uludag အသစ်သောကေဘယ်လ်ကားကိုခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေး်ထမ်းဆောင်မြို့လယ်နှင့် 1 နှစ်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်။ အဆိုပါမနက်စောစောပြီးနောက်အရှိန်အဟုန်ကောက်တံ့သောကေဘယ်လ်ကြိုးကားထဲတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးအပါဆုံးနည်းလမ်း၏ Uludag Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သက်တမ်းတိုး။ နိုဝင်ဘာလ 1 ကြာသပတေးနေ့ကတည်းကပြင်းထန်မှုရရှိခဲ့ခံရဖို့လေ့လာမှုများဖြင့်လိုက်ပါသွားဦးဆောင်သည်ဟုခေတ်သစ်ကေဘယ်လ်ကားအောင် Uludag Bursa ၏နိုင်ငံသားများ '' အမြင်များ။ ကေဘယ်လ်ကား, အအနစ်နာခံ၏ Bursa Uludag ပွဲအတွက်မြို့ 48 နှစ်ပေါင်း၏အရေးအပါဆုံးသင်္ကေတများထဲကတစ်ခုကိုလည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုလိမ့်နှင့်ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 1 အချိန်ပေါ်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကားအဲဒီနောက်အဖြစ်လွမ်းဆွတ်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ အသစ်ကေဘယ်လ်ကား ...
Konya ဓါတ်ရထားစစ်တမ်းယနေ့ည (ဗီဒီယို) ပြီးဆုံး၏အရောင်ကိုရွေးယူ 14 / 03 / 2013 Konya ဓါတ်ရထားစစ်တမ်းများ၏အရောင်ဟာအပိုင်းပိုင်း၏ယနေ့ည Konya တဲ့ Metropolitan 60 အရောင်များလူများ Konya မြူနီစီပယ်စုံ၏မြို့မှအသစ်နှင့်ခေတ်သစ်လမ်းရထားရရှိပါလိမ့်မယ်အဆုံးသတ်ကိုရွေးကောက်ပြီး။ KONYARAY Project မှသူတို့ထိုက်သစ်ကိုလမ်းရထားဆုံးဖြတ်ရန်မည်အရောင်အောင်မြင်ရန်လိမ့်မယ် yenilenmesiydi.son Konyalıအတွက်လမ်းရထားအဟောင်းလမ်းရထားထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခ၏အရေးအပါဆုံးတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကြာသပတေးနေ့မတ်လ 60 14 သစ်ကိုလမ်းရထားများ၏အရောင်အဆုံးအဖြတ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ညဦးယံ၌အဆုံးသတ်ထားသည်။ ညဦးတိုင်အောင်ကြာသပတေးနေ့မတ်လ 14 www.konya.bel.t, Kılıçarslanစင်တာစစ်တမ်းအတွက်အောင်ပွဲခံ Glass ကို Pavilion, Kent ပလာဇာစျေးဝယ်စင်တာ, မျှော်စင်ဆိုက်ကို AVM, M1 ဟေးလ် Mall, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်လူငယ်စင်တာတွင်အတူအင်တာနက်စာမျက်နှာ www.tramvayinisensec.co ...
Metrobus ပေးနေတာအဆုံးသတ်မှကြွလာသလား? 14 / 04 / 2013 IETT ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာ Hayri Baraçlı, ဇူလိုင်လ 705 ဘတ်စ်ကားစီးနင်းလုပ်သည်အထိပြီးခဲ့သည့်နှစ်လေလံဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ သူတို့ကဘတ်စ်ကားယာဉ်သက်တမ်းတိုးကြောင်းဖော်ပြထားသည်ယနေ့တွင် Mehmet လီမွန်းBaraçlı, အထူးအစီရင်ခံစာအရသိရသည်သူမက 3,5-xnumxyaş၏ပျမ်းမျှအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ကျနော်တို့4လိုင်းရှိ "၏Baraçlı။ ကြွလာကာလအတွင်းဘတ်စ်ကားအရေအတွက်အများပြည်သူဘတ်စ်ကားနှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 645 တထောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘတ်စ်ကားစီး6တဦးတည်းများအတွက်တင်ဒါပြီးစီးခဲ့သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဇူလိုင်လ၏လာမည့်လတွင်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်။ IETT စင်းကိုလက်ရှိ 705 တထောင်ဘတ်စ်ကားပါဝင်ပါသည်။33 တထောင်ဘတ်စ်ကားစီးဇူလိုင်လသည်အထိပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ 705 စိုစွတ်သောနွေရာသီ ...
Bursa လေ့လာရေးခရီးပြီးဆုံးအတွက် 48 နှစ်ပတ်လည်ကေဘယ်လ်ကား
Konya ဓါတ်ရထားစစ်တမ်းယနေ့ည (ဗီဒီယို) ပြီးဆုံး၏အရောင်ကိုရွေးယူ
ဇွန်လစွန်းİzmirdeစက္ကူလက်မှတ်လျှောက်လွှာ 28 ညနပေိုငျး
မော်တော်ယာဉ်ဆူညံသံအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ကုန်ဆုံး! IMM စတင်ခဲ့သည်